TMMOB iyo BTS React to Ringing ee TCDD Guest House | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTMMOB iyo BTS React to Ringing ee TCDD Guest House
30 / 07 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
tmmob iyo btsden tcdd martida aqalada kirada
Rector of Medipol University Prof. Hadalka Ahmet Zeki Şengil ee ku saabsan Saldhiga Ankara iyo qoondaynta, tahsis U qoondeeyay kiro, deeqo ma ihi.
Bayaan uu soo saaray Hasan Bektaş, Madaxweynaha Midowga Gaadiidka; Ince Markii ay dadweynuhu jawaab ka bixiyaan, waxay dhahaan kiro, ma ahan deeq. Halkani waa goob ka adeegatay sannadihii markii Jamhuuriyadda la aasaasay, waxay rabaan inay tirtiraan xusuusteenna iyo Saldhigga Ankara. Waxaan ka hadleynaa meelaha la kiraystay sanadka 29. Weligaa ma masixi kartid xusuusta Jamhuuriga adoo wareejinaya ama kireynaya. U oggolaan mayno taas. Dadka reer Ankara waa inay halkan ku ilaaliyaan. Caruurteena ayaa na weydiin doona xisaabta mustaqbalka.
Dacwadihii loo gudbiyay Rugta Dhismaha Laanta Ankara way sii socotaa. Waxaan ku boorinaynaa qof walba inuu soo fara geliyo dacwadahaan. Ankara Gar Campus laguma wareejin karo Medipol. Ankara waa caasimada dalkan waana caasimad xoog leh. Baahiyaha gaadiidkooda ayaa sidoo kale kordhaya. Hadda laga bilaabo, 30- 50 ma buuxin doonto baahiyaha sii kordhaya ee Ankara laba sano kadib. Haddii aad dhismayaal ka dhiseysid qiyaastii qiyaastii. Xarunta Ankara Gar waxay sii ahaan doontaa xarunta tareenka qaabkeeda asalka ah waxaanan sii wadi doonnaa sii ballaarinta halganka aan la galno Caqli-galinta Caasimadda iyo ururro kale. Saldhigga Ankara lama kiraysan karo jaamacad gaar loo leeyahay oo si gaar loo leeyahay. Mar labaad, fadlan gacantaada ka qaad markhaatiyada Jamhuuriyadda. Waxaa la yiri.
Tezcan Karakuş Candan, Madaxa Laanta Ankara ee Rugta Dhismaha ee sameysay bayaan ku saabsan mawduuca; Asına Ma aha qoraal kasta oo sharci ah oo loo soo gudbiyo Jaamacada Medipol in qoondeynta ay tahay mid sharci ah. Xuska aasaaska iyo aasaasida waddankeenna, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Gar Campus, oo ah markhaati ka ah Jamhuuriyadda, waa shacbi waana iska leedahay dadka. Ma noqon karto meel lacagtu ku baxdo, loomana beddali karo qalab hawleed ganacsi oo joojiso kiraysiga.
Candan wuxuu sii watay: “Albaabka jamhuuriga ee Ankara wuxuu u furi doonaa Ankara Gar Campus, Fagaaraha Cumhuriyet waana go aanka ugu weyn ee xudunta u sii fideysa Ulus. Markii Atatürk Ankara yimid, raadin cusub oo ay la yeelatay Jamhuuriyadda oo ku taal aagga saldhigga ay ku taal ayaa astaan ​​u ah madax-bannaanida iyo xorriyadda dhinaca dawladda. Saldhigga tareenka waa mid khaas ah marka la eego arrintan, wuxuu leeyahay qiimo xusuus, qiimo taariikhi ah, qiimo sumad leh. Waxay ahayd mid si gaar ah loo leeyahay iyada oo laga saaray bog bog ka bixitaankii magaalada halkaas oo taariikhda Jamhuuriyadda lagu qoro si qumman. Ma aqbali karno tan. Saldhigga Ankara waa annaga, annaga ayaa iska leh. ”
Candan wuxuu cadeeyay in qoondeynta ama kireeynta qeyb kamid ah dhismaha TCDD ay salka ku haysay labo sano ka hor. 13.03.2018 ayaa la hakiyey bishii Luulyo 6 halka qorshuhu isbeddelay. Taariikhahaasi kuma laaban doonaan sanadka 2018, oo Medipol ay muujisay. Markaa Medipol ha u sharrax tan. Halkee looga hadlay codsigan laba sano ka hor? Cinwaan iyo qorshe isbadal ayaa cinwaanka lasiiyay. Hannaanka baahinta badeecadaha dadweynaha waxaa laga wada hadlay meesha iyo jawiga. Sharax hab maamuuska kiradaada, ma sameysay labo sano ka hor? Protocol, 2 Agoosto 6 Medipol iyada oo loo marayo su'aasha dadweynaha ayaa la weydiiyay maxaad u sharxi weyday sababta aadan ugu baahnayn inaad sharaxdo sanadka ka dambeeya 2018. Meel kale oo loo qoondeeyay Medipol ama aasaaska aad xiriirka la leedahay. Ma runbaa in aad rabto in Xarunta Ankara iyo Xarunta Dhismaha TCDD loo qoondeeyo Medipol? Ma runbaa inaad codsatay cusbitaalka Numune Hospital? Ma haysaa wax sabab ah oo aad ugu sharaxdid codsiyadaada AOÇ, Saldhigga Tareenka TCDD iyo qoondeyn kale oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah qiyamka Jamhuuriyadda? Hawsha xiritaanka iyo wareejinta isbitaalada ku yaal bartamaha magaalada si adiga loogu qoondeeyo dhismayaasha taariikhiga ah iyo isbitaallada ku yaal bartamaha adiga? Sharax dhammaan su'aalahan iyo halka loo qoondeeyey Jaamacadda Medipol halkaas oo aad sharraxaad ka bixin doontid. Qiyamka, jiritaanka iyo taranka Jamhuuriyadda, iyo xusuustayadu lama kireysto, laakiin waxay iska leedahay shacabka ”.
Jawaabta Siyaasadeed ee Siyaasadda ka imanaysa TCDD ilaa BTS
Warbixinta saxaafadeed ee TCDD: 32 ayaa si qoto dheer uga xanaajisay tareenka
BTS waxay sheeganeysaa in ammaanka rakaabku uu hoos u dhaco
Kirada Guriga Martida ee TCDD